Faa'iidooyinka ugu yaabka badan ee siigaysiga | TOP | Ragga Stylish
Markii quraafaadkii iyo xatooyadii dhaqan ahaan ku hareeraysan falka siigaysiga looga adkaaday - xitaa waxaa la dhahay guskaagu wuu dhacayaa ama tabar la'aan baad noqon doontaa -, waxaan si isa soo taraysa uga warqabnaa faa'iidooyinka dhaqdhaqaaqa galmada guud ahaan iyo is-kicinta ama is-farxad gelinta gaar ahaan.
Si kastaba ha noqotee, inbadan ayaa wali isweydiinaya: Ma fiicantahay in la siigeeyo? Jawaabta bulshada cilmiga waa haa haa. Xirfadlayaal ku takhasusay caafimaadka, cilmiga jinsiga, cilmu-nafsiga iyo kalkaalinta caafimaadka ayaa ku adkeysanaya waxtarka weyn ee siigaysiga, dadka guska leh iyo kuwa xubinta taranka. Waad ku mahadsan tahay dalabka weyn ee dukaan wasmo galmo online galmada Waxay kaa caawin kartaa inaad dhaqankan ka dhigto mid aad u xiiso badan.
Sidaa darteed, waxaan ka guurnay khuraafaadkii iyo tabtii masturbay oo aan u gudubnay talo cad oo toos ah, gaaritaanka intaas iyo in ka badanba waxaa looga hadlayaa faa'iidooyinka siigaysiga si dabiici ah, gaar ahaan marka laga hadlayo dumarka, oo dhaqan ahaan looga cabsan jiray arrintan.
La ka fogaanshaha galmada, Waxaa loo fahmay galmo la’aan labadaba sida lamaanaha ama kali, iyo marka aysan aheyn go'aan iskood loogu sameeyay sababo diimeed ama arrimo kale oo shaqsiyadeed, waxay kordhisaa walwalka iyo walbahaarka walwalka waxayna dhaawacdaa dareenka shaqsiga ee farxadda. Waxaas oo dhan waxaa u dheer, la'aanta waxqabad erotic ah oo sahlaysa goobo wareegsan, taas oo qofka aan siigaysan wuxuu la kulmaa kacsi galmo ama libido. Intaas oo dhan, gabagabadu way cadahay: way fiicantahay in la siigaysto.
1 Dareen-celinta jir ahaaneed ee jirka inta lagu guda jiro siigaysiga
2 Faa'iidooyinka siigaysiga
2.1 Waxay yareysaa halista kansarka qanjirka 'prostate'
2.2 Waxay ka hortagtaa cillad kacsi
2.3 Jimicsi samee muruqyada sagxada miskaha waxayna ka hortagtaa ceshadka kaadida
2.4 Waxay hagaajinaysaa jawaab celinta habka difaaca jirka
2.5 Waxay ka hortagtaa infekshinka ku dhaca aagga xubinta taranka
2.6 Waxay ka hortagtaa da'da hore
2.7 Waxay yareysaa heerarka culeyska maskaxda waxayna ka hortagtaa cilladaha niyadda
2.8 Waxay maskaxda ku haysaa feejignaan
2.9 Waxay hagaajineysaa xiriirka shucuurta lamaanaha
2.10 Waxay hagaajisaa isku kalsoonaanta iyo ladnaanta guud
2.11 Waxay kuxirantahay imaanshaha orgasmka iyo muuqaalka kacsiga daran
2.12 Waxay yareysaa xanuunka caadada
2.13 Waxay ka caawisaa xakamaynta xanuunka daba dheeraada
2.14 Waxay ka caawisaa isku dheelitirka qaafiyada hurdada
2.15 Waxay ka hortagtaa oo wanaajisaa cudurada kale
Dareen-celinta jir ahaaneed ee jirka inta lagu guda jiro siigaysiga
Siigaysiga, ragga iyo dumarkuba, waxay u horseedi doonaan cascade saamaynta jir ahaaneed ee aadka loogu taliyay, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
Xoreynta endorphins iyo oxytocin. Midda dambe waa hormoonka jacaylka, kaas oo xoojiya isu dhawaanshaha iyo is-qaddarinta. Waxay soo bandhigaan ficil-celin xanuun, nasasho iyo aragtiyo farxad leh, taas oo keenta faa'iidooyin dhab ah oo siigaysasho ah.
Kordhinta heerarka immunoglobulin A, antibody par heer sare, taas oo naga dhigaysa inaan soo bandhigno difaac badan oo ka dhan ah cudur-sidayaasha dibadda.
Fududeynta abuurista neerfaha cusub, ka hortagga isbeddelada garashada.
Way cadahay markaa in siigaysigu yahay waxqabad caafimaad leh oo ay tahay in si joogta ah loogu dhaqmo, laakiin waa maxay sababta ay u fiicantahay in la siigeeyo Ku faa'iidooyinka siigaysigu waa badan yihiin, laga yaabee in ka badan intaad moodeyso, waana kuwan kuwa ugu waaweyn:
Waxay yareysaa halista kansarka qanjirka 'prostate'
Jidka ugu weyn ee nin awoodo ka hortag dhibaatooyinka qanjirka 'prostate', iyo gaar ahaan kansarka, waa biyo bax, taas oo ah, faaruqinta qanjirka 'prostate'. Dadka guska sameeya ee siigeysta 8-10 jeer bishii waxay leeyihiin 10% fursada ugu hooseysa ee kansarka qanjirka 'prostate', halka kuwa biyo baxa ka badan 21 jeer bishii ay yareeyaan halistooda 33%. Xogtaasi ayaga ayaa iska hadlaysa waxayna nagu qancinayaan shaki la’aan inay fiicantahay in la siigsado.
Waxay ka hortagtaa cillad kacsi
Biyo-bax la'aanta waxay u egtahay inay kordhiso kiisaska cillad aan kacsi lahayn muruqa dartiis awgeed, taasoo xitaa u horseedi karta xididdada xubnaha taranka ee xubnaha taranka. Siigaysiga labku wuxuu ilaalin doonaa xagasha guska oo laalaado, taas oo u baahan muruqa siman ee guska inuu ku hodansamo oksijiin ku filan, taas oo dhacda markay dhiig ka buuxsato xilliga kacsiga. Bini aadamku miyuu u baahan yahay inuu sifiican u siigeysto markuu sii gaboobo? Maya, tani gebi ahaanba waa been. Gaar ahaan la xiriirta siigaysiga ragga, sidaan aragno, way fiicantahay in la siigsado ilaaliyo caafimaadka ninka qaangaarka ah.
Jimicsi samee muruqyada sagxada miskaha waxayna ka hortagtaa ceshadka kaadida
Dhibaato dhaqan ahaan la xiriirta waqtiga dumarka sida uu yahay Kaadida oo kaadi marto, waxay leedahay cunsurkeeda ugu fiican ee kahortaga sii wadida howlaha galmada ee sii socoshada siigaysiga. Fikrad khaldan oo caadi ah ayaa ah inaad kaliya u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato murqaha miskahaaga umusha kadib. Sagxada miskaha waa inay ahaato mid firfircoon inta lagu jiro nolosha, sidoo kale ragga, sidaan ku aragnay marka loo eego cillad aan caadi ahayn.
Waxay hagaajinaysaa jawaab celinta habka difaaca jirka
Faa'iidooyinka siigaysigu waxaa ka mid ah inay oggolaato nidaamiya dhamaan nidaamkeena difaaca, kordhinta heerarka hoormoonka cortisol, si aan ugu sii diyaar garowno nooc kasta oo infakshanno ah oo ay sababaan fayrasyada iyo bakteeriyada. Daraasaduhu waxay muujinayaan, marka laga hadlayo ragga, inay fiicantahay in la siigaysto maxaa yeelay biya baxa kadib waxaa si muuqata u kordha unugyada dhiiga cad.
Waxay ka hortagtaa infekshinka ku dhaca aagga xubinta taranka
Siigaysigu ma aha oo kaliya inuu kordhiyo xasaanadda guud ee jirka, laakiin sidoo kale biyo-baxa iyo kaabsashada ayaa caawiya nadiifi dhamaan xubinta taranka in laga fogaado infekshannada ay ku dhacaan fangaska iyo noolaha guud ahaan. Biyo baxu wuxuu eryi doonaa bakteeriyada wuxuuna nadiifin doonaa tuubooyinka biyo baxa. Haweenka, way ku fiican tahay in la sifeeyo sababta oo ah bakteeriyada ku jirta makaanka afkiisa waa la nadiifiyaa oo infekshannada kaadi mareenka (cystitis) ayaa yaraada, taas oo ay ugu wacan tahay furitaanka afka ilmagaleenka iyo sii deynta dheecaannada afka ilmagaleenka markay siigaysato.
Waxay ka hortagtaa da'da hore
Siigaysiga iyo kacsiga dhiirrigelinta sii deynta sunta waxayna siisaa socodka dhiigga maqaarka. Intaa waxaa dheer, oxytocin wuxuu yareeyaa heerarka caabuqa jirka, isagoo aad waxtar ugu leh finanka iyo finanka.
Waxay yareysaa heerarka culeyska maskaxda waxayna ka hortagtaa cilladaha niyadda
Faa'iidada kale ee siigaysigu waa taas waxay dhiirrigelisaa xaalad guud oo nasasho, mahadsanid sii deynta dopamine, serotonin, prolactin iyo oxytocin. Way fiicantahay in la sifeeyo sababta oo ah muruqyada ayaa isdejiya, walaaca wuu yaraadaa xaalada fayoqabka ayaa guud ahaan lagu muujiyaa heer jireed iyo mid maskaxeed, taas oo keeneysa cunsur ka hortag ah dowladaha niyadjabsan iyo kordhinta aragtida farxada iyo kaftanka wanaagsan.
Waxay maskaxda ku haysaa feejignaan
Inta lagu guda jiro siigaysiga, waa wax caadi ah in loo adeegsado khiyaali ama xusuus, in kasta oo aan sidoo kale dooran karno kicinta dibadda, sawirrada, fiidiyowyada ama waxyaabaha galmada lagu ciyaaro Dhab ahaantii, maskaxdeennu waxay u bilaabmaysaa hal-abuur oo raadi dareenkaas luminta xakamaynta oo faa'iido u leh caafimaadka neerfaha.
Waxay hagaajineysaa xiriirka shucuurta lamaanaha
Haddii aad leedahay lammaane, siigaysi, kaligaa iyo joogitaankoodaba, waxay kordhisaa heerarka kacsiga waxayna hagaajinaysaa xakamaynta orgasmka, taas oo keenta cunsur aad u xiiso badan mararka qaar kuwa fekeraya iyo kuwa dareema inay ku qanacsan yihiin. Haa haa, way fiicantahay in sifiican loo lammaaniyo sidoo kale!
Waxay hagaajisaa isku kalsoonaanta iyo ladnaanta guud
Faa'iidada kale ee siigaysigu waa iyada oo ku lug leh is-aqoon jidhkiisa iyo dareenka aan ku heli karno khibrad, kuwaas oo aasaas u ah waayo-aragnimada galmada ee lagu qanco. Xiriir iswaafajin ah nafteena iyo galmadeena waxay hagaajin doontaa fikradeena laxiriira nafteena waxayna kordhin doontaa amaanka cilaaqaadka dadka kale, oo laga doorbiday sii deynta neurotransmitters-ka dhaqaajiya wareegyada abaalmarinta maskaxda.
Waxay kuxirantahay imaanshaha orgasmka iyo muuqaalka kacsiga daran
Daaweynta ugu fiican markaad dhib kuqabtid inaad gaartid orgaanku waa is-baaris. Way fiicantahay inaad siigaysato cadaadis la'aan, dabacsanaan, adigoo ilaaway in orgaanku yahay dhamaadka iyo ku raaxeysanaya howsha, taas oo hagaajin doonta aragtida qofka ee ku wajahan galmada, taas oo aad uga badan kacsiga oo aad uga fog xubinta taranka.
Barashada ku raaxeysiga jirkeena oo dhan waxay ka saareysaa cirifka muhiimada ay leedahay in la gaaro kacsiga waxayna naga dhigeysaa inaan ku raaxeysano wax badan oo wanaagsan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, aaggu si joogto ah ha loo kiciyo wuxuu si weyn u fududeeyaa ugu dambeyntii, siinta nabadgelyo aad u badan kulamada lammaanaha, marka aan ogaanno waxa aan ugu jecelnahay iyo waxa noo horseedaya kacsiga.
Faa'iidooyinka ugu caansan ee la yaqaan ee siigaysiga, ma iloobi karno xanuun joojinta caadada, taas oo ay ugu wacan tahay sii deynta hormoonnada soo saara xanuunka, oo ay weheliso bixinta dhiigga ee aagga miskaha, taas oo gacan ka geysan doonta yareynta caabuqa.
Waxay ka caawisaa xakamaynta xanuunka daba dheeraada
Dadka la xanuunsanaya xanuunka daba dheeraada waxay soo sheegaan inay wanaagsan tahay in si joogto ah loo sifeeyo, iyo inay ka caawiso inay ilaaliyaan xaalad wanaagsan oo nasasho iyo xakamaynta weyn ee xanuunka. Xaaladahaas oo kale, is-baariddu waa lama huraan, qof walbana wuxuu ogaan doonaa soo noqnoqoshada iyo dhaqdhaqaaqyada ugu faa iidada badan iyaga.
Waxay ka caawisaa isku dheelitirka qaafiyada hurdada
Adoo sababaya daal, yareynta walwalka iyo kobcinta nasashada, siigaysigu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ilaaliso a nadaafada hurdada, Ka caawinta kaliya maahan in dib uheshiisiin hore iyo si fudud loo sameeyo laakiin sidoo kale laga fogaado baraarujinta habeenkii. Siigaysiga saxda ah wakhtiga jiifka waa a caado kaa caawin doonta inaad seexato maadaama inta kale faa iido badan tahay.
Waxay ka hortagtaa oo wanaajisaa cudurada kale
Horumarka caafimaadka guud ee ay keento siigaysiga badanaa wuxuu keenaa a yareynta nooca labaad ee sonkorowga, wuxuu yareeyaa astaamaha astaamaha lugaha aan xasillooneyn wuxuuna ilaaliyaa nidaamka wadnaha iyo xididdada. Marka la soo koobo, hawl siigaysi firfircoon, ha ahaato lamaane ama kali, iyo dumarka iyo ragga labadaba, waxay naga dhigeysaa inaan ku noolaano dareen wanaagsan oo fayo qab iyo xaalad wanaagsan oo caafimaad guud, dareemno soo kabasho badan, firfircoon iyo mid wanaagsan tayada noloshayada.
Natiijooyinka caafimaad waxay muujinayaan, faa'iidooyinka siigaysiga, inay sidoo kale jiraan ka hortagga horumarinta cudurada qaarkood iyo waxqabadkeeda oo ah jimicsi jireed iyo maskaxeed oo wanaagsan, iyada oo ay ugu wacan tahay sii deynta hormoon aad u daran iyo nadiifinta marinka xubinta taranka. Way fiicantahay in la sifeeyo, maadaama raaxada kaliya aysan naga dareemin wanaag laakiin sidoo kale ay inaga dhigeyso caafimaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Faa'iidooyinka ugu yaabka badan ee siigaysiga